PaKutsauka, Hunyanzvi uye Hunhu - Mhinduro kuchinyorwa chaProf Yoram Yuval, "Havatsauka", Shabbat P. P. Akef Supplement - Inoenderera Column (Koramu 26) - Rabbi Michael Avraham
PaKutsauka, Hunyanzvi uye Hunhu - Mhinduro kuchinyorwa chaProf Yoram Yuval, "Havatsauka", Shabbat P. P. Akef - Inoenderera Column (Koramu 26)
8 makomendi	/ 19 Elul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 19 / 09 / 2016
Muchikamu yapfuura Ndakataura pamusoro pechinyorwa chaProf. Yoram Yuval muShabbat supplement yaMakor Rishon P. nokuda kwegore rino (XNUMX). Iwe unofanirwawo kuona iyo nhaurirano yakagadziridzwa mune talkbacks pazasi positi yangu.
Mhinduro yangu kuna Prof. Yuval yakabudiswa muchidimbu muchidimbu cheShabbat chekuwedzera P. Ra'a (pamwe chete na Mamwe mashoko Zvinofadza kuti ivo vese vakakodzera kuverenga ). Heano mazwi angu akadhindwa ipapo:
Pakutsauka, hunyanzvi uye kukosha
(Mhinduro kuchinyorwa chaProf. Yoram Yuval, “Havatsauki”, Shabbat supplement P. Akev)
Chinyorwa chaProf. Yuval Luca chine musanganiswa wakakomba wezvakakosha uye chokwadi. Zvine musoro kutaura kuti musiyano uyu waiva kenduru patsoka dzasekuru vake vakanonoka vataurwa munyaya yacho, uye zvinonzwisa urombo kuti anofuratira.
Matauriro ake anomira pambiru nhatu: 1. Muenzaniso wehukama hukuru uye nyanzvi. 2. Tsanangudzo yepfungwa yekutsauka kwepabonde (kusakwanisa kuda munhu wose). Zvinotaurwa neSainzi: Ungochani hausi mhedzisiro yesarudzo asi yemamiriro ekunze, zvakaoma kwazvo kuchinja uye zvine njodzi kuedza. Nechekare pano inotaura muchidimbu: 3. Muenzaniso wakarongwa naYuval hauna kururama (ona zvinyorwa masikati G) uyewo hazvina basa nehurukuro pano. 1. Tsanangudzo yepfungwa zvakare haina chekuita nenhaurirano. 2. Iyi mibvunzo yehunyanzvi haina basa nenhaurirano. Ini zvino ndichatsanangura.
Kamwe ndakanga vagere kollel muna Zvizvarwa Brak uye mudzidzi akauya kwandiri ndokubvunza kana girazi rakanga mvura kana hwakasimba. Ndakamuudza kuti kana toreva mitemo weSabata girazi zvikukutu, kunyange zvazvo yefizikisi vanowanzotevedzera kutsanangura sechinhu mvura yavo nyanzvi zvavanoda. Zvino mufananidzo, kana wepfungwa rinorondedzera unzenza sezvo nekusagona kuda rose munhu - zvavo zvinonyadzisa. Asi nei halacha kana netsika nemaonero nyanzvi tsananguro yoashandisa pane normative chechetere uyewo? Uyezve, tsanangudzo dziri kwete empirical kuwanikwa, saka nyanzvi haana paanopfuura munhuwo zvake pachinhu kwavari. Vanachiremba vepfungwa vanogona uye vanofanira kutsanangura pfungwa dzavo zvinodiwa nachiremba, asi kuti ane hapana chokuita normative mubvunzo. Michel Foucault akanyora kuti vepfungwa zvokuongorora yakazara ukoshi zvekungofungira. Pasinei nokuva mumwe kwezvapupu ose postmodernism mumaziso angu, akanga zvakarurama nezvazvo. Eya, kaviri pazuva kunyange yakamira wachi inoratidza zvakarurama nguva.
Chiremba wepfungwa anogona kunyanya kuona kwakabva ungochani. Iine genetic, zvakatipoteredza, kana mamwe mamiriro. Anogona kuona kana achigona kurapwa uye munzira dzipi, uye kuti kurapa kumwe nokumwe kunoguma nei. Izvi zvose zvisungo zveunyanzvi, uye tichifunga kuti zivo yesayenzi iripo (uye haisi yakakwana munyaya iyi, iyo mumaonero angu haina kusimbiswa zvakakwana mumashoko aYuval), nyanzvi inogona kuvapa mhinduro. Asi mubvunzo wekuti uku kutsauka uye kuti kunofanirwa kubatwa sei inyaya yetsanangudzo yenormative uye kwete yekutsunga kwehunyanzvi (ona zvinyorwa zviri pamusoro).
Mamwe mazwi maviri:
A. Senyanzvi diki yezvepfungwa, ndinokahadzika tsananguro yakapihwa naYuval yekuchinja kwemafungiro epfungwa nezveungochani. Sekuona kwangu, uku ndiko kunonyanya kuchinja kwehunhu uye kwete kwesainzi-chokwadi. Chikamu chinokosha chevanhu nhasi chinotenda kuti chiitiko chacho hachina kunaka kwetsika (kunyange mudiki anobvumirana neizvi) uye naizvozvo haazvioni sekutsauka. Psychiatry pano inodhonzwa pasi nemagariro evanhu, uye kwete imwe nzira yakapoteredza. Funga nezvekleptomania. Ngatitorei nechinangwa chehurukuro kuti ine mavambo ekuberekwa uye kuti haigoni kuchinjwa (kushandurwa). Izvi zvinoreva here kuti kleptomania haisi kutsauka? Inorambidzwa uye inokuvadza kuba, saka zvinonzwisisika kutsanangura kleptomaniac seyakashata. Izvi zvakadaro kunyangwe paine tsika yekuba hazvireve kuti munhu anoba (sekutsanangurwa kwaYuval nezveungochani), uye kunyangwe ipapo haigone kurapwa uye ine genetic kana organic masosi (sezvandaifungidzira nechinangwa che hurukuro). Musiyano uripo pakati pekleptomania noungochani ndewokuti vazhinji varapi vepfungwa nhasi vanodavira kuti kunobvumirwa uye hakuna ngozi kuva ngochani, nepo kuba kuchirambidzwa uye kunokuvadza mumeso avo. Zviri pachena kwatiri kuti izvi zvakakosha uye kwete chokwadi.
B. Yuval anonyora kuti "murume wese akadzidza wechitendero" anoziva kuti muimba yevanorwara zvakanyanya anogona kurara munhu akafa zvachose ane mwoyo uri kurova. Ndinofunga kuti ndiri munhu akadzidza kwazvo (uyezve anonamata chaizvo), uye handinyatso kuzviziva. Uyezve, kunyange iye pachake haazvizivi. Hazvinei nedzidzo (kunyangwe kuchitendero pamwe hongu), mhou nekuti tsananguro yerufu nehupenyu ndeyetsika uye kwete yekiriniki. Chiremba anogona kuona, kana zvachose, ndeapi mabasa aripo mumamiriro ezvinhu akadaro, uye ndeupi mukana wekudzoka kubva kune hupenyu hwehupenyu. Asi haakwanisi kuona kuti munhu akadaro mupenyu here kana kuti akafa, uye zvechokwadi kwete kana achikwanisa kupa nhengo dzemuviri (izvo semaonero angu pachangu zvinotenderwa uye zvinotosungirwa paari kunyangwe achionekwa semunhu mupenyu. Ona zvinyorwa mundima ye Kt). Iyi yese mibvunzo yakakosha kwete yechokwadi. Vanachiremba vakasiyana-siyana vanoramba kubvuma izvi ndechimwe chiratidzo chekuti musanganiswa wehunhu uye chokwadi chinooneka kwete muvasina basa chete.
Prof. Yuval vakapindura izvi pane webhusaiti, iyo inowedzera mhinduro kune isu tose. Mhinduro chaiyo kumashoko angu (uyewo kuna Dr. Azgad Gould) inosimudzwa Pa webhusaiti yake Uye uyu ndiwo mutauro wake:
Mukukudza Rabhi Dr. Michael Avraham
Iyo Yepamusoro Institute yeTorah
Munorevesa, Rabbi Shalom naBracha,
Kutanga, ziva kuti vakasaina pasi vanokutendai zvikuru nebasa renyu. Ini handisi munyika yeTorah kusvika pamwero unondibvumira kukoshesa basa rako reTorah uye halakhic, asi neurobiology uye huzivi hudiki hwandinonzwisisa hwakanga hwakakwana kuti ndifarire zvakanyanya bhuku renyu "Sayenzi yeRusununguko", yandinofunga kuti basa rekutanga uye rakanaka rekufunga.
Zvichienzaniswa nekunakidzwa kwangu nebhuku renyu, zviri pachena kubva mumhinduro yako isingafadzi kubva kuzvinyorwa "hazvitsauki". Ndosaka ndichifara nekumwe kuvandudzwa kwandakaita kwandiri pano, kuti ndiedze kukupwisa nezvekururama kwemashoko angu, uye kana zvisiri kugutsikana, saka tanga kutanga kuvaka zambuko pakati pegomo rako negomo. gomo rangu. Ngatitange nezvinhu zvandinobvumirana newe:
Ndinobvumirana newe kaviri (uye kwete kaviri pazuva) nezveMichelle Foucault. Zvose maererano ne postmodernism, iyo yandinotendawo kuti haina zvinyorwa, uye maererano nekutsunga kwayo pamusoro pekuongorora kwepfungwa, umo, zvinosuruvarisa, iye akarurama chaizvo. Asi ndinotenda, uye handina chokwadi chekuti pano unobvumirana neni, kuti hazvigoneke neimwe nzira: inotongerwa kuongororwa kwepfungwa, nehunhu hwayo chaihwo, kuti haizokwanisi kuputsa fungidziro dzekukosha, kana kwete. mune ramangwana rinoonekwa. Uye saka izvo muzivi anogona kukwanisa - kuparadzanisa kupatsanurwa kwakapinza pakati pezvakakosha uye chokwadi, chiremba wepfungwa haakwanise. Uye kunyanya haakwanise kuzvinyengedza iye neruzhinji kuti kune - kana kuti inogona kuvapo - kupatsanurwa kwakakwana mumunda wake. Ndichazodzoka kune izvozvo gare gare.
Iniwo ndinobvumirana nekuongorora kwako kwakapinza mubvunzo wehalakhic status yemurume akarara mu intensive care kana pfungwa dzake dzapera uye dzisingachashanda zvakare, apo mwoyo wake uri kurova, uye ndakatodzidza chimwe chinhu chitsva kubva pane zvawakanyora muchitsauko. misoro yenyaya mumhinduro yako. Uyezve: Ndinofara kuti mhedziso yako yekupedzisira - kuti zvinosungirwa kupa nhengo dzemurume uyu - yakafanana neyangu. Ndinovimba kuti iwe ucharamba uchitora mukana wechimiro chako uye pesvedzero pakati peBnei Torah kuti uchinje kusaziva - uye kunyangwe kusatendeka - maitiro evamwe vatungamiriri veultra-Orthodox uye yenyika-yechitendero chechiJudha kunyaya.
Asi zvaunogona kuita pamusoro pekusiyanisa pakati pe "vapenyu" uye "vakafa", iwe haugoni, mumaonero angu, kuita pamusoro pekusiyanisa pakati pe "kutsveyamiswa" uye "kusina kutsveyamiswa." Ini ndichatsanangura mazwi angu: Kutanga, zvinopesana nezvaunonyora, chiremba uye zvimwe nzira yekuziva kana munhu ari mupenyu kana kuti akafa. Ndinoziva izvi zvekutanga. Apo ndaishanda mudhipatimendi revarwere vanorwara sachiremba ane mazvikokota, rutivi runosuruvarisa rwebasa rangu rakanga riri rokuziva, pakutanga chiedza, kufa kwavarwere vakafa mukati mousiku. Ndichiri kurangarira, nanhasi, zviso zvakawanda zvandakavhara nejira ndichigadzirira kusvika kwemushandi wepamba, uyo akauya kuzovatora kuti vatange rwendo rwavo rwokupedzisira.
Uye zvakadaro ndinoziva kuti iwe wakarurama kana iwe uchitaura kuti halakhic kutsunga kuti ndiani "mupenyu" uye ndiani "akafa" inogona kusiyana nekutsunga kwechiremba, uye haisi kutsauka pasinei nazvo. Asi mhedziso yakananga kubva mumhinduro yako, kuti tsananguro yepfungwa yekutsauka uye tsananguro yechitendero (uye zvechokwadi tsananguro yemagariro-yechitendero) yekutsauka haina hukama, mumaonero angu hairatidzi chokwadi.
Ngatitorei kleptomania, iyo yamakaunza seyeyedzo kesi. Kleptomania haisi kutsauka. Kusagadzikana kwepfungwa. Izwi rekuti deviation rakachengetwa mune zvepfungwa, semumutauro wemumugwagwa, kune zvisirizvo, kwete kutaura zvinosemesa, maitiro mune zvepabonde. Ndinovimba hausi kuyedza kushandisa masvomhu, uye kukosha-kusarerekera, tsananguro yekutsauka kubva pane zvakajairwa (aka standard deviation), kuitira kuti ive pamutemo kukwira kweiyo yakashata kukosha maitiro e-ultra-Orthodox Judaism yakarongwa kuita ungochani.
Psychiatry inobata kwete chete ne "maitiro" asi ne subjective phenomena; Sezvawakanyora, uye ndinofara kuti pano unobvumirana neni, kleptomaniac haifaniri kubira kuti ive kleptomaniac, uye ngochani haifaniri kureva nhema kumurume kuti ave ngochani. Asi pano panoperera fananidzo pakati pemufananidzo nemufananidzo. Iyo kleptomaniac inokuvadza uye inokuvadza vamwe mumafambiro ake, saka maitiro ake haana kunaka (kwete kutsauka), uye nzanga inobvumirwa kudzivirira pairi. Uyezve: kana akaba zvinhu zvinokosha, chirwere chake chepfungwa hachigoni kumira kwaari mudare, uye chinozoonekwa chete panharo yekukakavadzana. Ini ndinofunga isu tose iwe neni tinobvumirana kuti ngochani havasi matsotsi, uye kana vasingarevi nhema kumurume - hazvina kujeka kwandiri kuti vakasiyana sei nevamwe varume vese vechiJudha, vanotarisanawo nekurambidzwa kweTorah pakuratidza hupombwe hwavo.
Ini ndinodzokera kunyaya yekusakwanisa kuparadzanisa zvakazara tsika kubva kune chokwadi uye chokwadi mune zvepfungwa. Mukristu weKatorike anotenda nekutenda kwakazara kuti chingwa chechirairo chaakagamuchira nekudya panguva yeMisa chakava mumuromo make nyama yechokwadi yaMesia. Ipfungwa yenhema yezvinangwa zvese nezvinangwa, uye inotsauka kubva kutsanangudzo yepsychosis nekuda kwemagariro uye kukosha kwakajairwa - mazana emamiriyoni evanhu vanotenda mazviri. Uyu muenzaniso mudiki, asi psychiatry, kana zvasvika pakutsanangura, kuongorora nekurapa zviri kuitika, inotsvanzvadzira murima pamusoro peiyo biological-chokwadi hwaro hwezviitiko izvi.
Ndingafara kukwanisa kuisa basa rangu pazvigadziko zvakafanana zvinomira pairi fizikisi, asi hazvizoitike muhupenyu hwangu, uye kuti zvisazoitika. Sezvaunoziva zvirinani kubva kwandiri, mubvunzo wakakosha wehuzivi uri pasi penyaya iyi, wandinofunga kuti hauna mhinduro inogutsa parizvino, inyaya ye psychophysical causality: inzira imwe chete kana mbiri-nzira kana kuti haishande panyaya yacho. zvese? Sekuru vangu vawataura vakabata, sewe, nemubvunzo we psychophysical causality, uye vakatotenda kuti pakanga pasina uye haigone kuve mhinduro kwairi (Ignorbimus - isu hatizivi uye isu hatizomboziva). Pasina kunyepedzera uye ndisingaedze kupinda mugobvu apa, ndinotsigira pfungwa yemudzidzi wake, Prof. Yosef Neumann, aifunga kuti nhasi hakuna mhinduro, asi mangwana zvinogoneka (Ignoramus - hatizivi, asi tinogona kuziva rimwe zuva).
Pakupedzisira, ndinoda kudzoka kubva kumusoro kwehuzivi kuenda kunyika ine rima yengochani dzechitendero. Ndakanyora chinyorwa changu ndichitevera mashoko emumwe wako Rabbi Levinstein, uyo akadzinga vanhu vakanaka ava uye akavasuruvarisa. Pakupera kwezuva mubvunzo unoshanda unondifarira, uye wandisina kuwana chinongedzo chakananga uye chakakodzera mumhinduro yako (uye ndinovimba chirevo chakadaro), ndechekuti paine nzira yekutendera ngochani dzechitendero kurarama uye kutanga. mhuri munharaunda dzechitendero dzeZionist. Kana zvasvika kune vanhu vasiri kureva nhema kumurume, izvi zviri mumaonero angu anozvininipisa mubvunzo wezvemagariro evanhu pane halakhic. Pano, mukuona kwangu, iwe, ini, uye vaverengi vedu vose tinofanira kuyeuka chirevo chemumwe wako, Albert Einstein: "Zviri nyore kupaza opaque pane kupaza rusaruro."
Uye heino maitiro angu pano kumashoko ake:
Wadiwa Prof. Yuval, Mhoro.
First of all in my honour wakanakidzwa nenhamba dzangu ukatoratidza kuvonga pano. Hazvisi nyore kwandiri.
Chokwadi, handina kubvumirana nezvamakataura munyaya yacho, kunyange zvazvo ndisingagoni kutaura kuti handina kunakidzwa nazvo. Semazuva ese, zvinhu zvakanyorwa zvakanaka uye nenzira yakajeka uye yakanaka. Uye zvakadaro, sezvakataurwa, kunyange mushure me "mupendero wekuvandudza" (sezvaunoisa), handibvumirani navo, uye ndichaedza kutsanangura pano chikonzero nei.
Kana tikabvumirana paFoucault (ndinoreva pfungwa yechipiri), saka tasvika pamhedziso yekutanga yakajairika yekuti psychiatry yakazadzwa nekukosha fungidziro uye zvakanyanya kubva pazviri. Izvo zvinewo chiyero chechokwadi hongu, asi iyo yepasi peiyo nguva dzose inosanganisira kukosha uye mibvunzo yetsika.
Nekuda kwekuti makabvumirana kuti ndizvo zvazviri, handioni matauriro amunoti hukama pakati paRabhi nachiremba wepfungwa hunoenderana nemuenzaniso wehukama pakati penyanzvi narabhi. Kunyangwe kana psychiatry ikasazviona sekutsauka, iwe uchiri kubvuma kuti iko kukosha chirevo. Naizvozvo nei rabhi achifanira kugamuchira ikoku sokutsunga kwenyanzvi? Anogona zvechokwadi kusarudza kuti achaiwana, asi isarudzo yake ye halakhic uye haina chekuita nemasimba ehunyanzvi. Kana uri wemuenzaniso werabhi maringe nenyanzvi, wakatoreva kwandiri mumhinduro yangu yekutanga Kunyaya yandakazvipira kunyaya yacho Masikati m.
Iwe wobva wawedzera kuti hazvidzivisike (kuti psychiatry ichasanganisa hunhu nehuchokwadi). Kunyange zvazvo ndisiri nyanzvi, ndinoramba ndichitaura kuti handibvumirani nazvo. Ndiruramisei kana ndakanganisa, asi psychiatry ingadai yakatarisa pane chokwadi (mupfungwa yakakura, i.e. kusanganisira dzidziso dzinodzitsanangura, semuzvarirwo sainzi), uye hapana zvimwe. Semuyenzaniso, angadai akagutsikana nguva nenguva kuti chii kwakabva ungochani (kwandiri izvi zvinosanganisirawo fungidziro dzemusango dzepfungwa sezvaunoda, chero bedzi idzi dziri dzidziso dzinoedza kutsanangura chiitiko chacho pasina muripo), kuti inovandudza (ibid.), Ikoko kwakawanda, kana uye sei Izvi zvinogona kuchinjwa, uye chii mutengo wemhando ipi zvayo yekuchinja (kana "kushandura" kwete patiri) zvakadai nezvakadaro. Iyi mibvunzo inobata nezvechokwadi nekuturikira kwadzo, uye saka iri pamutemo mibvunzo yesainzi neyehunyanzvi. Zvinoratidzika kwandiri kuti mibvunzo iyi yese haina kubhadhariswa chero kukosha kwekubhadharisa. Nekune rimwe divi, mubvunzo wekuti kutsauka here kana kuti kwete, unofanirwa kusiirwa kunzanga uye nemunhu wese arimo kuti aone.
Hongu kana iwe ukaitawo pfungwa ye "kutsauka" chokwadi changu, sekutsauka kubva kuhuwandu hwehuwandu ("neutral mathematical tsanangudzo", mumutauro wako) ipapo psychiatry inogona kusarudza izvi nenyanzvi, asi iwe wakatobvumirana mune zvaunotaura pano kuti. izvi hazvisizvo. Kune rimwe divi, iwe unodzoka pano uye wogadzirisa kubatsira kwangu muizwi kutsauka, uye ndinofunga mukuita izvi uri kuedza zvakare kuraira tsananguro yepfungwa yekushandiswa kwemazuva ese. Mukushandiswa kwakajairika mumatunhu edu kutsauka kune simba (muzvarirwo?) Tsika yekupara mhosva (semuenzaniso wekleptomania watakabvumirana, kunze kweshoko rekuti "kutsauka"). Imwe nzira kana imwe, iyi ndiyo tsanangudzo, ndicho chikonzero Rabbi Levinstein uye mudiki wangu (uyo ari kure kwazvo nemaonero ake pazvinhu zvizhinji) anobvumirana kuti hapana nzvimbo yekutora chiremera cheunyanzvi pamusoro payo. Chii chiri kongiri yemukati meiyo pfungwa, uye inosanganisira ungochani, ini pachangu ndinofunga kuti kwete (nekuti mumaonero angu kutsauka ndeye tsika yekuita unzenza, uye kwete tsika yekupara mhosva mupfungwa yechitendero). Ndinofunga kuti maonero aRabbi Levinstein ndihongu (nokuti mumaonero ake maitiro ekuita zvehutsotsi mupfungwa yechitendero zvakare kutsauka, zvichida nokuti anozivisa halakhah netsika, izvo zvandinoramba zvakasimba uye nekudaro ndinobatana nekupedzisira tangle).
Pazasi, ini handioni chikonzero munyika cheAmerican Psychiatric Association kana chero imwe nyanzvi yemubatanidzwa kuti ione isu tese izvo zvinofanirwa kurapwa uye zvisingafanirwe, uye chii chiri kutsauka uye chii chisingafanirwe. Izvi zvinofanirwa kusiirwa kunzanga, kumunhu wega wega, uye zvakare kune wake wepfungwa chiremba (kusiyana nemubatanidzwa wavo wehunyanzvi). Izvi zvinoreva kuti: nzanga ichasarudza kana pane chimwe chinhu chinokuvadza kune vamwe (kleptomania, pedophilia, etc.), uye zvino inofanira kurapwa kunyange kana murwere asina kuratidza chido chayo (muzviitiko zvakanyanyisa zvakakwana). Mumamiriro ezvinhu apo pasina kukanganisa munharaunda, munhu wacho pachake achasarudza kana achida / achida kurapwa kana kuti kwete. Uye zvechokwadi chiremba wepfungwa waanotendeukira kwaari (uye kwete sangano) anogona kutaura kuti haadi kurapa nyaya iyi nekuda kwemaitiro ake. Chero zvazvingava, ini handioni nzvimbo yezvisarudzo zvakabatanidzwa zvesangano renyanzvi panyaya dzakadai.
Ini ndinofunga kuti mufananidzo uyu unojekesawo kuti sei mumaonero angu paine chokwadi uye kutiza kubva pakuunza kukosha kweiyo psychiatry. Sekunzwisisa kwangu mumuenzaniso uyu tinodzivisa izvi, saka mumaonero angu chiremba wepfungwa anogona kunyatso siyanisa pakati pezvakakosha uye chokwadi, senge fizikisi kana muzivi. Sezvo ini ndisiri nyanzvi, handina kupokana kuti kukanganisa kunogona kuitwa mumashoko aya, uye ndingafara kana mukandiruramisa.
Ndizvo zvimwe chete nechimiro chemunhu akarara muimba yevanorwara zvikuru apo mwoyo wake uri kurova uye pfungwa dzake dzamira kushanda. Vanopikisa mumaonero angu, avo mumaziso angu vasina kururama uye vanokuvadza, havasi "vasingazivi," mumashoko ako. Mushure mezvose, izvi hazvisi chokwadi kana ruzivo rwemhando ipi zvayo, uye naizvozvo ndinopikisa kushandiswa kwezwi iri nekuremekedza kwavari. Mukuona kwangu ivo havana tsika uye ndosaka vachikuvadza. Zvekare, zvakakosha kuti ndingwarire kusiyanisa pakati pezvakakosha uye chokwadi. Chaizvoizvo nokuda kwechikonzero ichi chiremba haana kukosha kwakawedzerwa maererano nemubvunzo uyu.
Izvo zvawataura mukutaura kwako pano kuti mukuita chirevo ichi chinopihwa kuna vanachiremba hachisi chinhu kunze kwekutumwa kwechiremera, uye hapana chimwe. Uku hakusi kutsunga kwehunyanzvi. Usasanganise kukosha uye chokwadi zvakare. Chaizvoizvo ipa sarudzo yekuona kufa kune vanachiremba (sezvawakatsanangura nezvako muheti yako sachiremba), asi izvo hazvireve kuti ichokwadi-nyanzvi sarudzo. Izvi zvinoitirwa kurerukira uye kushanda zvakanaka chete, uye kutaura zvazviri kuri kupa masimba edare reparamende kuna chiremba chete kuti vapfupise uye vagadzirise hurongwa.Tsvaga rufu, kunyangwe kuri kukoshesa kukosha). Kusarudza kuti ndeapi mabasa ane munhu iyeye mumamiriro ezvinhu akadaro uye kuti ndeapi mikana yake yekudzokera kuhupenyu isarudzo yehunyanzvi. Sarudzo kana mumamiriro ezvinhu akadaro anoonekwa seafa - isarudzo yakachena yakakosha. Haanei nechokuita nechokwadi. Kusiyana nezvawakanyora, sarudzo ye halakhic maererano nehupenyu nerufu haina "kusiyana nesarudzo yekurapa." Mhou kuti hakuna chinhu chinonzi "chisarudzo chekurapa" maererano nehupenyu kana rufu. Ichi ndicho chisarudzo chakanaka (sezvatsanangurwa pamusoro). Ichokwadi kuti sarudzo yepamutemo inogona kusiyana neiyo halakhic, sezvo maviri aya akasiyana anojairika (pane echokwadi) mapoka.
Tinobvumirana zvizere kuti ngochani hadzisi matsotsi. Asi hatibvumi zvamazvirokwazvo kuti ngochani (idzo dzinoshandisa muitiro wadzo chaizvoizvo) hadzisi matsotsi. Tinobvuma kuti zviito zvavo haisi mhosva, ndiko kuti, mhosva yetsika (ndakataura kuti kune avo vari mumusasa wechitendero vanofunga zvakasiyana, ini handisi mumwe wavo), sezvo vasingakuvadzi vamwe. Asi halakhic neTorah matsotsi, saka kubva mune zvechitendero uye halakhic maonero ivo matsotsi nenzira imwechete yemhondi kana gororo (asi ivowo vane tsika dzechitsotsi). Kuwanda kwemhosva ndeimwe nyaya hongu. Apa ndipo panouya dhigirii resarudzo nekutonga kwavanazvo uye mwero wekuziva kuti ichi chirambidzo (munhu wepanyika haaoni ichi chiito chisiri pamutemo hongu). Kungofanana nekleptomaniac pamberi pembavha yenguva dzose.
Zvakakosha kwandiri kuti ndione kuti maererano nekubatwa kwengochani, ndinotosununguka kupfuura zvawaitarisira kuti ndive. Kwandiri, kunyangwe avo vanoziva nezvenyaya iyi vane kodzero yekubatwa sevanhuwo zvavo munharaunda (kunze kwekunge iye achisimudzira pairi uye nekuiparidzira, inova mharidzo yehutsotsi maererano nemutemo). Munhu ari tsotsi munharaunda yake yomunhu oga kana kuti yakavanzika inhengo inotenderwa munharaunda, zvikurukuru kana ari mumugariro wakaoma zvikuru kubata nawo. Ndakanyora nezve izvi zvakanyanya munguva yakapfuura, uye unogamuchirwa kuona semuenzaniso Here uye zvakare Here. Wakashamisika kuti sei zvinhu zvisina kubuda mumhinduro yangu mubepanhau, izvi imhaka yekuti ndakataura ipapo chete pamakakatanwa amakabuda muchinyorwa chenyu kwete pamusoro pegwara renyaya. Kana iwe ukaona kutanga kwemhinduro yangu yakareba muchikamu yapfuura Yangu saiti, uchaona kuti ndakanyora zvakajeka kuti ndinobvumirana nezvakawanda zvemhedzisiro yako inoshanda. Sezvineiwo system haina kunditendera kuti ndiwedzere mhinduro mubepanhau. Ndosaka ndakagadzira "dzimwe gadziridzo" mumakoramu maviri ekupedzisira pano pane saiti uye muhurukuro yakatevera (mukutaura).
Uye ini ndichapedzisa nemimara yawakataura se "wandinoshanda naye", sezvaunoisa (Ndinotonyara kutaura zita rangu mune imwe yakawira pasi nehofori yesainzi yakadaro). Zvechokwadi zvakaoma kuchinja kana kuparura rusaruro. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti munyaya yeDidan iyi ndeye rusaruro, kana kuti inzvimbo yakasiyana-siyana inokosha (chinzvimbo chega chega chekukosha, kusanganisira yako uye zvechokwadi yangu, kusarura mupfungwa). Iyo taboo uye magariro maitiro munharaunda yechitendero kune ungochani (iyo mukuona kwangu haina chekuita nekurambidza, sezvo kurambidzwa kwehunyanzvi paShabbat hakuna kuderera uye haagamuchire kubatwa kwakadaro) zvirokwazvo kusarura mumaonero angu (nekuti. fungidziro dzechokwadi dzinoitwa, kwete tsika chete). Asi iwo maonero chaiwo ehungochani sechirambidzo haisi rusaruro asi halakhic yakajairwa (kunyangwe kana zvisingafadzi mumaonero angu). Maonero kumaitiro akadaro (sekune chero tsika) hongu zvinoenderana nezvinotendwa nemumwe nemumwe wedu. Ini pachangu ndine kutenda kune mupi weTorah, kuti kana akarambidza pane chimwe chinhu chinonetsa pazviri (izvo muurombo hwangu handina kuwana kucherechedza). ndinorerekera moyo wangu kumirairo yake. Asi sezvo iyi iri mibvunzo yekutenda, handidi kuti vepfungwa vatore zvinzvimbo, uye kwete vakatsunga, nezvavo (sezvinoitika kuchirairo mumiromo yehama dzedu dzechiKatorike), uye tadzoka zvakare mukana uye kuda kubvisa psychiatry kubva kune arrays. Uye pamusoro paizvozvi vatenzi vedu vakatoreva (ibid., Ibid.): Ipai kuna Kesari zvaKesari.
 Ndinofanira kutaura kuti pamwe chete nezvinyorwa zviviri zveYoav Sorek, iyo yakadhindwa mukuwedzera kumwe chete masvondo maviri apfuura uye yakaburitswa pawebhusaiti yekuwedzera yeShabbat (p. Ona), iyi ndiyo nhaurirano ine hungwaru uye yakakodzera inozivikanwa ini mumapepanhau kana zvachose panyaya iyi. mukukudzwa kwangu kuti ndive nechokuita nawo.
PaKutsauka, Hunyanzvi uye Hunhu - Mhinduro kuchinyorwa chaProf. Yoram Yuval, "Havatsauka", Shabbat P. P. Akev Supplement (Koramu 25)
'Hefza' yeTorah - mhinduro kune chinyorwa chaRabbi Yehuda Rak
Halacha uye chokwadi - chii chinonzi halakhic hunyanzvi
8 Pfungwa pa “Pakutsauka, Hunyanzvi uye Hukoshi- Mhinduro kuchinyorwa chaProf Yoram Yuval, “Havatsauki”, Shabbat P. P. Akef - Continuation Column (Koramu 26)”
30 Tishrei 10 - 2016/12/31 na XNUMX:XNUMX
Chokutanga pane zvose, ndinoda kuratidza kuti ndakanakidzwa chaizvo netsamba uye hurukuro, kudzika kwayo uye kunyange mhedziso dzamunobvumirana pazviri.
Nekudaro, ndichiri kusanzwa kuti ndinonzwisisa nei uchiomerera pakutsanangura kutsauka setsika yekutadza uye kwete kungotsauka kubva pane zvakajairwa? Chiyero chekutsauka kubva pane zvakajairwa zvinoda kupindira kana kurapwa kwakakosha, asi kutsauka chaiko kubva pane zvakajairika kuri pamutemo.
Ndinokumbira ruregerero nekudzosa Foucault muhurukuro, asi muThe Madness of the Age of Reason, Foucault yakataura izvozvo chaizvo uye ndinonzwisisa kuti tichasvika pamhedziso dzakafanana uye dingindira rimwechete rekusiyanisa pakati pechokwadi (kutsauka chaiko kubva kune yakajairika curve) uye hunhu (isu tese tinotsauka Kana kurongedza kwakakosha)
Hapana chinotadzisa kutsanangura kutsauka nenzira iyi. Tsanangudzo inyaya yako. Asi ndinofunga kuti iyi haisiriyo tsananguro inogamuchirwa uye kwete izvo zvaidiwa naRabhi Levinstein uye zvatiri kukurukura pano. Naizvozvo, isu (Yoram Yuval neni) takabvumirana kusazvitsanangura nenzira yemasvomhu uye isina kwayakarerekera. Mukushandiswa kwemazuva ose "kutsauka" mutsara une chirevo chisina kunaka chakajeka. Zvinoenderana nezano rako, Rabbi Levinstein akangotaura chimwe chinhu chisingakoshi uye chisina basa, saka nei uchitaura nezvazvo?! Hapana kupokana kuti ungochani hwechokwadi hunoratidza vashoma muhuwandu. Nhaurirano (naRabhi Levinstein) ndeye mabatirwo ayo chaiwo (panowo Yuval neni ndinobvumirana, kunze kwemazwi uye kukosha kwechiremera chenyanzvi pakukurukurirana). Imwe nzira kana imwe, nharo dzese dziri pano dziri pamutengo wendege uye kwete iyo yechokwadi-yemasvomhu.
Handina kunzwisisa kutaura kwako paFoucault. Mushure mezvose, isu pachedu takadzorera Foucault kuhurukuro (mushure mekubvumirana pamusoro pemafungiro asina kunaka pamusoro payo), nokuti pano iye akarurama chaizvo (wachi yakamira, nezvimwewo). Isu tose takabvumirana nekutaura kwaFoucault (mubhuku rawataura) kuti kuongororwa kwepfungwa kunobva pakukosha uye fungidziro dzetsika. Asi ini ndinofunga kuti ndicho chikonzero nei chiremba wepfungwa asingakwanisi kupfeka ngowani yake yehunyanzvi mukupokana pano (sezvo izvi zviri hunhu uye kwete chokwadi).
Izvi (uye chete izvi) ndiyo gakava riri pakati pedu izvozvi. Nharo dzakafanana dzakafanana ndezvekukoshera kwechiremera chehunyanzvi hwechiremba maererano nekuona nguva yerufu. Asi iyi ndiyo nharo imwe chete pachayo.
Dambudziko retsika nekurambidzwa kwese makunakuna, nderekuti munhu haangotadza chete asi anobatsira nekusimbisa mumwe wake mukukanganisa.
Apo hukama hunorambidzwa hunoitwa nemasangano uye hunoonekwa kune vakawanda pasina kunyara - ipapo chiyero chemuenzaniso wakashata chinowedzerwa kune vakawanda uye chirevo chevanhu kuti izvi zvinotenderwa, chirevo chine simba rinoparadza kuvakomana vachiri mumamiriro ezvinhu. kupokana, uye muenzaniso wakashata unogona kugumbura kurambidzwa.
Yese Israeri yakabatana, uye zviito zvemunhu zvine zvazvinoreva pakutonga kwese. Isu tose ngative neropafadzo yekutsveneswa uye kuvandudzwa mumwe nemumwe mune zvaanoda kuvandudzwa, uye nokudaro kutonga nyika yose nenzira yakarurama.
Kwaziwai, S.C. Levinger
Nokuita kudaro unenge washandura kurambidza kupi nokupi kworudzi rupi norupi kuva mhaka yetsika. Mushure mezvose, maererano nemufananidzo wegomba muchikepe, kunyange zvikanganiso zvisingabatanidzi mumwe munhu zvinokanganisa kuguma kwake. Saka maererano neizvi Torah yese hunhu.
Kana ukasatsanangura kuti kurambidza kuri pachezvako kune hunhu, hazvina musoro kutaura nezvazvo kuva nehunhu nekuda kwekutadza nekukuvadza. Iyi ndiyo tribal tautology.
30 Tishrei 10 - 2016/12/34 na XNUMX:XNUMX
Mune SD XNUMX Elul XNUMX
Kuna Rabbi Avraham Neru - Mhoro,
Zvamazvirokwazvo, kudarika kwose kwokuda kwaMwari utere, tine musengwa wokukudzwa kwoMusiki, zvose zviri zviviri kubva pakuva ‘muridzi weimba’ munyika yose, uye pakuonga nyasha dzake dzose dzaakatiitira.
Panguva imwecheteyo zvirambidzo zvakawanda zvemakunakuna, izvo zvinotisimudzira kuvaka hupenyu hwemhuri hune hutano, hunodzorwa kwete chete nemasikirwo, asi nehunhu hwerudo, kuvimbika uye mutsa, nekuda kwekuti baba namai vanobatsirana uye vanodyara zvisingaperi. rudo nokuzvipira.
Asi kunze kworukudzo rwoMusiki, panewo musengwa wokutanga woruremekedzo kuvabereki. Kuora mwoyo kwakadini kunoparirwa kuvabereki apo mwana wavo anowira muupenyu hwahwo hwose huri chirambidzo chakakomba, upenyu umo musina mukana wokugadza ‘Chizvarwa Chakakomborerwa’ icho chichapfuuridzira nzira yechiJudha?
Munhu anoziva kuti vabereki vake vakaisa mari yakawanda sei paari uye kuti vakapa upenyu hwakadii kuti vamuunze munyika kuti vamurere uye vamudzidzise – anosungirwa kuita zvose zvaanogona kuti abve paakadonha.
Kungofanana nevabereki vanowanzoenda kuburikidza nemishonga yakaoma, zvose mumuviri uye mupfungwa, kuva neropafadzo yekumbundira mwana, uye kana vakasabudirira mukurapa uku, edza imwe kurapa, uye usakanda mapfumo pasi - zvino zviri kumwana. uyo akanga ane mari yakafanana yokuisa nayo kuvabereki vake.Musikana wechiJudha'. Uhwu ndihwo hudiki hwaanokwanisa kuvadzorera pane zvese zvavakamuitira zvakanaka.
Kunyangwe varapi vasina chokwadi chekuti pane anogona kushanduka, vanoti kune vakabudirira. Kunyangwe kana tsika yeungochani yakasimba uye yakasarudzika, izvo zvinozonetsa zvakanyanya kuchinja - anodaro Dr. Zvi Mozes (munyaya yavo, 'Is Treatment of Reversal Tendencies psychologically effective', pa'Root' website), kuti vanhu vakanyanyisa. akatsunga uye ane kutenda kwakasimba, anogona kutanga mhuri, nerubatsiro rweKutarisira kwakakodzera kwehunyanzvi.
Kurerwa uye kurera mwana, kunze kwokusapedza chinetso chokurambidza, kunobatanidza kuchema kuvabereki uko mwana akatorwa kwavari. Kuwedzera kudiwa kwekurera mwana kune varume nevakadzi kuchaita kuti pave netsika yekubatsira vanhu kuti vawedzere 'rubatsiro' kuburikidza nekunyanyisa kurera mwana pane kuedza kusiya mwana mumaoko evabereki vake.
Kunyanya se'surrogacy' kushandiswa kwekutambudzika kunotyisa kwemhuri. Hapana mukadzi anonzwisisa achapfuura nekutambura kwepamuviri uye kubereka, kuitira kuti mwana apiwe kune vasingazivi, kunze kwekunge ari mumatambudziko anotyisa emari kana epfungwa, uye ndiani anoziva kana masangano ematsotsi nehurumende dzine uori zvisingabatanidzwi?
Sezvandakanyora, zvese izvi zvinogona kunge zviri zvechokwadi uye zvakadaro igakava risingakoshi kunhaurirano. Mubvunzo ndewekuti ndeupi rudzi rwezvirambidzo pachazvo, uye kwete kana paine mativi ehutsika.
Kupfuura izvozvo pane mamwe manotsi pamutumbi wezvinhu:
Musiki ndiye akasika munhu nemafungiro ake. Handina chokwadi chokuti ndinoona musengwa wetsika pamunhu kuti achinje izvozvo.
2. Kuvhiringidzika kwevabereki kunogona kuvapo, asi panogona kuva nezviitiko apo zvisipo. Zvino chii? Azla basa rake retsika? Kupfuura izvozvo, kunyange ndisina kutarisa asi ndinofunga kuti kune vakaroorana vakadai vari kurera vana vanochengeta makuva. Ndinofunga kuti "hapana mukana" mutsara wakanyanya kusimba.
3. Munhu haana "kudonha" asi "akabatwa."
4. Zvose izvi nharo dzinotaura nezvebasa rekuchinja (kana zvichibvira), asi usanongedza dambudziko retsika muchiito chaicho.
5. Munhu haafaniri kuchinja mararamiro ake nokuti zvinonetsa vabereki vake. Zvinozivikanwa kubva kuRiki iyo yakataurwa muRama Yod kuti mwanakomana haafaniri kuteerera vabereki vake pakusarudza wokuroorana naye, uye ndakawedzera pane izvi muzvinyorwa zvangu zvekukudza vabereki.
6. Kune varapi vakawanda vanotaura kukundikana uye kukuvara kunotyisa. Handina kupinda mumubvunzo wekuti kurapwa kwacho hakugone kushanda, asi iwe wakatsanangura mamiriro acho nenzira yakanyanyisa. Zvinodikanwa kuti munhu aite ngozi dzakadaro zvinofanira kuva pahwaro hwakasimba zvikuru. Uye zvakare, padanho rechitendero pane chokwadi chinodikanwa chakadaro, asi kuchiona sechisungo chetsika handina chokwadi. Hapana kuonga kunosunda munhu kupinda mukutambura kunotyisa kwakadaro nengozi dzendangariro. Kuti vabereki vachapinda mukushandura marapirwo ayo achachinja pfungwa dzavo uye kubvisa kuvhiringidzika, zviri nyore uye zvakanyanya kudiwa (mutsika, kwete halakhic).
7. Maonero ekupedzisira itsanangudzo ine divi rimwe chete uye yakarerekera divi rimwe chete (uye ndinoshandisa mutauro wakapfava zvikuru). Zviri pachena kwauri kuti dai wanga usina kunyatsopikisa uye nemamiriro ezvinhu aya waisazviona saizvozvo. Surrogacy chibvumirano pakati pevanhu vakuru. Uye chero chingabuda mazviri, munhu anofanira kurwisa nekuchidzivirira. Hainonoki chiito pachacho. Kupa rubatsiro kunogonawo kukonzera kuti vanhu vashaye mari uye vanogona kuba. Yigal Amir akanzi ane chitendero chechitendero chaigona kutungamirira kukuuraya nezviito zvakanyanyisa. Ichi ndicho chikonzero nei kutenda kwechitendero kuchifanira kurega?
Semutemo, kana iwe ukasimudza marudzi ese enharo uye nekuda kwechimwe chikonzero munhu wese kusvika padanho rekupedzisira munzira imwe chete, ndinofungidzira uye kuongororazve kutonga kwangu.
Pasina kupinda munhaurirano yakadzama yezvese mapoinzi awasimudza - ini ndichaita imwe chete kutaura nezve njodzi dzinokurukurwa mukushandura marapirwo.
Chokutanga, munhu anofanira kunzwisisa kuti hakusi kurapa kwose kunopiwa kwakakodzera, uye kune marapiro angave akakodzera mumwe munhu uye anogona kukuvadza mumwe, kungofanana nemishonga, apo zvinobatsira mumwe zvinogona kuunza mumwe kumagedhi erufu, saka. semushonga zvinhu zvose zvinofanira kuitwa neimwe nyanzvi yezvepfungwa Kunyatsoongorora uye kunyatsogadzirisa mamiriro ekurapa kumunhu.
Uye chechipiri, munhu anofanirwa kuziva kuti sainzi iri kutsvanzvadzira murima kana zvasvika kune iyo nyaya yese yeungochani (nenzira, chikamu chikuru cherima ndechekuzvidira, ichivharira chero kuedza kutsvaga nzira yekubuda nayo, nekuti chiitiko pachacho chinyengeri chekuzivisa chingochani zviri pamutemo).
Imwe yenjodzi huru inokonzerwa nekuedza kuporesa kutya kwekupererwa zvachose nekuda kwekukundikana kwekuedza kurapwa. Nekudaro, kana iwe uchiziva pachine nguva kuti aya maitiro matsva uye ekuedza marapirwo - chiyero chetarisiro chakanyanya pakati nepakati, uye nekudaro kuodzwa mwoyo kwekukundikana hakuputsi munhu. Uye nzwisisa kuti izvo zvisati 'zvaenda' panguva iyi nenzira iyi, zvinogona kubudirira mangwana nenzira yakati siyanei, 'uye kana zvisiri mangwana saka kuswera mangwana' 🙂
Kune rimwe divi, munhu anofanira kutanga kubva pamavambo ekutenda kuti Mwari akaisa dambudziko guru kuvanhu kuti vawane mushonga wetsika iyi inopesana neTorah. Ukuwo, kuziva kuti nzira iri mberi irefu uye hatisati tawana mhinduro yakajeka.
Izvi ndizvo zvakaita matambudziko ese evanhu, pakuedza kutsvaga mushonga - wepamusoro. Dzimwe nguva makumi emakore anopfuura, dzimwe nguva mazana, uye zvakatonyanya, uye zvakadaro usaora mwoyo uye kureba uye ramba uchitsvaga munzira dzese dzinobvira, kusvikira kamwe kamwe budiriro yauya.
Kutanga, iyi mishumo kubva kunyanzvi dzepfungwa.
Chechipiri, chero vasina kuwana kurapwa uye zvese zvakazara nemhute sezvaunotaura, zvino unotarisirei kubva kumurume? Kuva netsika uye kusave ngochani pasina kurapwa kunoshanda?
A. Tsvaka mhinduro.
Kubvunza nyanzvi uye kuverenga mabhuku eunyanzvi, kunogona kuita kuti munhu anyatsonzwisisa unhu hwake uye zvikonzero zvechinetso chake, chaanogona kuwana mhinduro itsva ari oga, zvichida kunyange nzira dzisina kumbofungwa nenyanzvi.
B. Ita kuti dambudziko rive dambudziko.
Sezvinongoita vanhu vanofarira kuyedza kupaza nyaya isina kujeka muGemara kana mu'Edges'. Pano mukomana akawana dambudziko rinonakidza - kutsemura chirahwe chehupenyu hwake. Zvibvunze kuti chii chinomutsa rudo rwake uye zvido zvake uye chii chinodzikamisa? Ziva unhu hupi hunoita kuti ade vezera rake? Uye zvichida kunewo mukadzi ane hunhu hwakadaro hunogonawo kumutsa rudo rwake uye gare gare zvichida kunyange kunyungudutsa kusamira mukukwezva kwepabonde.
chetatu. Uyewo wedzera mamwe manzwiro etsitsi kune 'kurongeka'
Avo vanotarisana nechinoitika chakaoma chisingatsungiririki chokufamba mumugwagwa umo vanogara vachisangana navakadzi vane chipfeko chiri chose, kana kuti kusapfeka, chakarongedzerwa kunyandura mirangariro yomuzvarirwo yaavo vanopfuura napo mumugwagwa.
D. Kuziva maitiro 'ekuzviparadzanisa' pachake kubudirira kwese, kunyangwe kudiki uye kusarura.
Kufunga kuti Musiki wake anofadzwa sei nebudiriro iri yose, uye kubva mukuramba kwose kwomuzvarirwo. Ichatanga kufarira kurambwa kwechisikigo kwemaawa mashoma; Gare gare kwemazuva mashoma, uye gare gare kune anopfuura izvozvo. Kungofanana nemafungiro akaipa anouya nguva nenguva, anotanga zvishoma uye achienderera mberi nezvakawanda, saka ‘kusvika kumwero mukuru’ mafungiro akanaka - anoenderera mberi kusvika nhasi!
Mwari. Kuita zvinhu zvinofadza.
Kudzidza, basa, mimhanzi, kuzvipira uye zvichingodaro. Izvi hazvisi izvo zvatakadzidziswa naFarao mambo weIjipiti here, achiti, ‘Basa ngarikudze vanhu, murege kuvaponesa nenhema,’ uye zvisina kufanana navadzidzisi vedu vakatidzidzisa?
uye. Usagara uchinyura mu 'dambudziko'.
Saka ichokwadi.'Dambudziko' rinova 'kuzivikanwa'. Hwisisa kuti munhu wese ane zvishuwo zvake nekupunzika, uye nekusiyana, mu "chiyero chakanaka kuwanza" nhongonya uye kubudirira kunowanda. Sezvo Egipita iri pamusoro pekukundikana, munhu anofanira kufara kakawanda pamusoro pekubudirira kwehupenyu nemabasa akanaka, ayo chaizvo nokuti anouya nekusuwa uye nekuoma, anokosha zvikuru kunzvimbo.
P. 'Nokuti mufaro waMwari ndiro simba renyu'.
Kana munhu akanyanya kunzwa huvepo hwaMwari munyika - mufaro uri maari unowedzera. 'Ndakakumbira Ishe pamberi pangu nguva dzose nokuti kurudyi handingawisi', uye sezvakakumbirwa navateveri: 'Nokuti muchabuda nomufaro' - nokufara. Kugoverana naMwari mafambiro ose ehupenyu, mukubvuma zvose zvakanaka uye nekukumbira zvakashaikwa, zvemunhu pachake uye nenharaunda yose. Paunosvika kuhupenyu nemufaro uye kureruka - unokanda zvipingamupinyi zvose.
Idzi ndidzo dzimwe dzehwaro dzokugonana nougamba, uye sezvinobvira munhu upi noupi anogona kuwana muruzivo rwokuzviwanira rwake amene noruzivo rwokuzviwanira rwavamwe rimwe zano rakanaka, ‘Ipa vakachenjera ugova wakachenjera zvikuru’.
Kwaziwai. Handina kubvumirana rimwe mutongo wako. Asi sezvo ndakatanga sei kwavari (kudzokororwa nokusanganisa pakati zvetsika uye halakhah, zvachose isiriyo pamuviri yetsika, uye zvichingodaro uye nezvimwewo), ndakaziva pane imwe nguva kuti ichi chakanga chisiri kusawirirana. Zvinhu chete kunokukura. Kana ini kubvumira, ndinofunga inotevera nyaya, izvo I kamwe richibva Rabbi Shalom Shevdron, zvinojekesa pachena chaizvo. Akati iye kamwe akaona mukomana uyo akawa mumugwagwa uye akakuvara, akamunhonga ndokutanga kumhanya kuchipatara. All munzira, vanhu vaibva mahwindo uye Vanopfuura vakashevedzera kwaziso kwaari, akadai "Rabbi Shalom, mushonga wakakwana" (mu Yiddish Ichokwadi). Uye saka akamhanya wakamhanya uye vose vaida. Pashure anoona pamberi pake maminitsi mashoma mukadzi kufamba kwaari kure uye chokwadi iyewo vakashevedzera kwaari, kufanana vose, "Rabhi Shalom, kuporesa zvakakwana." Zvishoma nezvishoma akasvika kwaari uye inzwi rake simba zvishoma. Panopera apo iye pakupedzisira achiona ndiani (= mwanakomana wake, Chokwadi) akatanga mhere nokutya. Panguva iyi nezvaaida uye zano vaiva pamusoro. In wakasununguka shanduro: Ndakamboona munhu atambure zvose hwake nokuda munhu vachiberekwa malformation. Muupenyu hwake hwose sezvo akafamba doro pasi mutoro wake wose akati kwaari, "Unofanira kugadzira dambudziko dambudziko," kana "Wana kunzwisisa unhu hwako." Vamwe akatopa kwaari zano vakasununguka: "Kubva kuomerwa ichavakwa. ' Iye anonzi akati "ndechekuti kubva mumisha". Wedzera nayo "kuziva sei kumurumbidza pachako kuti ubudirire ose, kunyange zvishomanana chete." Vamwe akatosvika kuzivisa kwaari: "A pfungwa tsitsi kwatiri kuti isu havatamburi uye hatina aitambura kutambudzwa soups" (= chii mafaro uine!). Kana "Rovedza uri dzinonakidza zvinhu, pane kugara rikabatwa dambudziko." Uye chokwadi Chokwadi, "mufaro Mwari simba." Mehadrin kubva Mehadrin vangawedzera pano: "Chokwadi, anenge hapana anobudirira, asi ndanzwa kuti pagungwa Mavhoriyamu pane vaya vanotora D mazana zvendarama mari dzavo uye kuvarwere (kana vakanga vachinzwisisa tichimutya Ichokwadi wechokwadi uye kana vakaenda nyanzvi Chokwadi kwechokwadi) ehe vakabudirira. Mwari rubatsiro Rabbi Shalom. " Handina chokwadi kuti waizonzwa sei kana wanga mumamiriro ezvinhu seizvi uye mumwe aizounza iwe ichi zano zvose zvakanaka. Ndinoziva kuti ndinoda kunzwa. Iwe apedza akati kuti munhu wose anogona kubva zvakaitika kuwana mazano akanaka. Ndinokuudzai chete zano rakanaka I kuswedera kubva ruzivo rwangu pachinhu ezvinhu akadaro, kuti chokupedzisira chinhu chimwe zvinodiwa mazano ichi mhando uye zvakafanana. Ndinofunga zviri nani kwaari kuti kubvuma chokwadi uye kuti hatina zano, asi chandiinacho ndichava uye Baba vangu vari kudenga akarayira pamusoro pangu (yechitendero uye unzenza chirevo).
Zvinogoneka kuti mazwi aRabhi Levinger anotaurwa nenzwi rakasununguka nekuti ari kure nedambudziko. Iye nevamwe vangasanzwa saamai vemwanakomana iyeye. Hazvirevi kuti haisiriyo mhinduro chaiyo. Pashure petsitsi dzose nezvinetso zvemamiriro acho ezvinhu, mashoko ake anopfupikisa zvakashata zvikuru zvinokarirwa kuita ngochani yorudzidziso. Kupfuura izvozvo - mazwi ake anopfupisa kwete zvakaipa izvo muJudha wese anotarisirwa kuita. Zvinogoneka kunzwira ngoni munhu upi noupi (ngoni inhau ine ukama sezvainozivikanwa), tose tine zvinetso nezvinetso, uye iyi ndiyo chaiyo nzira iyo muJudha anofanira kubata nayo nazvo.
Chekutanga, chokwadi chekuti mumwe munhu ari kure nedambudziko chinofanirwa kumuita kuti asvike kana kusataura nekusiyana kwakadaro uye slogan yakadaro.
Ndakanga ndisiri kungotaura nezvemhinduro chete asi nezve matauriro azvaitaurwa. Asi kunyange mhinduro pachadzo hadzina kururama. Kutanga, hapana chinetso chetsika pano, uye ndipo pakatanga kurukurirano yose. Chechipiri, mazhinji emazano aya haabatsiri. Vamwe vanopa chokwadi nenzira yakasarudzika uye yakarerekera. Chimwe chikamu chinomunyaradza nekunyaradza kusina basa. Munhu mumwe chete anotambura anogona kusarudza kukunda Kari uye pamwe achabudirira, asi haugone kumupa mazano kubva kudivi richakunda Kari uye kuti mufaro waMwari inhare yake. Uye wowedzerawo kwaari kuti ane unzenza nokuti anoodza mwoyo vabereki vake noMusiki wake.
Kunze kwezvo, sezvingabvira haasati achizokwanisa kugonana nazvo, kungofanana nomumwe nomumwe wedu angadai asina kubudirira mumamiriro ake ezvinhu. Ini ndaizotarisira kurevera kune izvozvo zvakare. Muudze kuti haisi inotyisa, sezvo iri basa rakaoma uye rinenge risingabviri. Izvi panzvimbo yekutaura mavhesi asina chinhu uye nyanzvi dzisina kujeka dzakasarudzwa ne tweezers uye kwete kumubatsira (kunze kwekunge vari "nyanzvi", kusiyana nevarapi vese vepfungwa munyika, asi kana achitenda uye akatsunga.
Kana iwe uri shamwari yepedyo yemunhu akadaro uye iwe unokwanisa kumukurudzira kuti aite zvakatsunga kuita uye kumutsigira - zvinogona kuitika. Asi kwete sezano rechikoro chepamusoro chekubata nemamiriro ezvinhu anotyisa kudaro.
Matauriro angu achakurumidza kuuya pano, uye ipapo zvichava pachena zvishoma.
Muna XNUMX yeElul, XNUMX
NeChina chapfuura, Rabbi Michael Avraham Neru akabvunza "chii murume uyu" kuti abude mumamiriro ake ezvinhu. Uye ndakatsunga kuita kuda kwakarurama, uye ndakapindura mubvunzo wake sezvandaiziva uye sechiitiko changu.
SemuJudha, uyo, sevamwe vose, 'akapupurira zviitiko zvakawanda', akapfuura nemumatambudziko nemafungu, kukwira nekudzika, nezvimwewo, nezvimwewo - ndaigona kupfupikisa nzira dzekuita uye kufunga kuti ndaifanira kubatsira kugadzirisa matambudziko angu. uye angabatsira vamwe kubata nezvinetso zvake.
Ini ndanyatso kukanganwa imwe pfungwa, yakauya mumashoko ako, uye ingangove yekutanga uye yekutanga:
H. Chengetedza kudzikama uye kudzikama mumamiriro ezvinhu anonetsa zvikuru.
Chii chichakupa uye chii chichaita kuti utsamwe? Paunenge uchiita nekuda kwekushushikana, kuvhiringika uye 'kushushikana' - iwe unongopinda nekunyura mumatope zvakanyanya.
Saka zvibate, uye ongorora mamiriro acho ezvinhu zvakadzikama. Iwe uchadzidza chidzidzo, kubva mumabhuku uye kubva kune nyanzvi; Uye zvisinganyanyi kukosha, dzidza iwe pachako: kuziva izvo zvinokudzikisa uye zvinokusimudza? Chii chinoshungurudza uye chii chinonyaradza?
Muchokwadi, izvi ndizvo zvinoitwa nenyanzvi dzepfungwa uye vanachipangamazano: gara pasi newe uye uite 'arithmetic yepfungwa' newe, uye kubva ipapo unosvika pakunzwisisa midzi yedambudziko uye nzira dzekurigadzirisa.
Zvamataura pamusoro pa'amai vemwana', izvo zvinotora chimiro chemwanakomana wavo, hazvina kujeka. Neniwo ndakataura nezvekutambudzika kunotyisa kwevabereki pamusoro pedambudziko remwanakomana wavo, nhamo iripo nyangwe vakakunda kuchema kwavo mumoyo yavo.
Kunyange Yitzchak anofamba mumurairo waMwari kusunga - moyo wake unorwadza nekuda kweshungu dzamai vake 'vakashandura chiso chake, mwanakomana akazvarwa kwemakore makumi mapfumbamwe, akaitirwa moto nechikafu, ndine urombo kuti mai chemai mucheme'. Ngatikomborerei saJosefa kuti mufananidzo wemufananidzo wevabereki vedu usimuke kwatiri panguva yekutongwa kwakaoma.
Chekutanga, kunyangwe ndikatarisa zvakandikomberedza handiwani pano murume akarurama ane chishuwo chaanoda kuzadzisa, ndinofanira kukumbira ruregerero nekurodza kwezvinhu zvandakanyora mudutu renharo. Vanotaura semazuva ose nemano neruremekedzo, uye ini muzvakaipa zvangu munhu ane dutu.
Kunoratidzika kwandiri kuti kuseri kwakanga kune zvibvumikiso zvamakataura pamusoro pounzenza hwenhau yandakanga ndisingabvumirani nazvo zvakasimba, uye zvakasiya ratidziro uye chisimbiso kunyange pamamwe mashoko anorwadza anouya gare gare. Ndinofunga kuti paivewo nedivi rimwe chete pakupa zvinhu, uye airatidza kuti aisave mutorwa kwandiri.
Pakupedzisira, zvingave zvichibvira kuwana rubatsiro mukutaura kwako kumunhu asina kufunga, asi ndichiri kufunga kuti zviri nani kuaisa mumamiriro ezvinhu akati siyanei, sezvandakataura muhurukuro yose.
Zvese zvakanaka uyezve sorry.
Iti kune anorwara :: Warasika. Hauna mukana. Kuenda kuchipatara hapana. Endai kumarinda.
Wonyunyuta pamusoro pokuzviuraya. Uye pamwe vakomana vakanaka verudzi rwako vanounza vanorwara nekuora mwoyo uye kuzviuraya?
Pane imwe nzira zvakare. Zvinogoneka kuvapa zano rinoshanda (kunyangwe paine zvishoma zvinosuruvarisa, uye zvakakodzera kuzvijekesa nekutendeseka uye kwete kuchena), asi pasina zano kwete aya matipi, uye pasina dambudziko rekunyaradza rawakapa iro rinongowedzera kushushikana ( uku achisimbisa mufaro waMwari).
Uye hazvina kunaka kuvapenda mufananidzo wakashata uye usina kuvimbika (sokunge vanokundikana ava varapi vasina unyanzvi, uye sokunge kuti mutendi ari kubudirira).
Uye kunyange ichokwadi kushoma kuvatsanangurira kuti ivo vane utere nemhaka yokuti vabereki vavo vakaisa mari mavari uye Musiki wavo anotarisira kwavari uye ivo vanongokundikana ndokurerwa mukutenda kwavo. Uri kurevesa here? Iyi ndiyo nzira iyo nhamo inopindurwa nayo ( R. Barar naYitzha AA, XNUMX)?
Uye zvakare maererano nekufunga kwehunhu kwawakaratidza. Uye kuti kana vabereki vangu vaida kuti nditakure makirogiramu zana kumusana kwangu upenyu hwangu hwose ndaizofanira kuzviita nokuda kwokuonga? Pane mhosva yetsika yakadaro here? Ndatokuyeuchidzai nezvaMaharik nezvekusarudza wekuroora. Ini ndinotaura kuti tiri kukurukura nezvehunhu uye kwete halakhah. Panofanira kunge paine halakhic charge. Asi kutaura kuti pane mhosva yetsika? Ruregerero, rwakakokonyara chete. Kazhinji, kuonga kuna Mwari hakusi nyore zvachose, uye mumaonero angu hakusi kwetsika asi kwehuzivi. Ona zvinyorwa pano:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/מעבר Pamusoro peizvi zvese, zvakakosha zvikuru kuvanyaradza kuti kunyangwe vakakundikana, vanenge vamwe vese havangazvimirirewo. Uye isu takatowana muKetubot Lag kana asiri iye kuna Hanania Mishaeri naAzaria akakochekera zvikamu kune mutori wemifananidzo, akadudzwa zvakanaka mumusiyano pakati pekutambudzika kunopfuurira uye kutambura kukuru asi kwenzvimbo uye kwechinguvana.
Mashoko pamusoro pemikana yekubudirira mashoko aDr. Zvi Mozes, mutungamiriri weShiloh Institute, mumwe wenyanzvi dzepamusoro muchikamu chedu. Uye anotaura zvakajeka kuti kana maitiro akajeka ekuchinja akaoma zvikuru, asi vanhu vakatsunga zvikuru uye vane kutenda kwakasimba vanogona kubudirira nehutungamiri hwakakodzera hwehutano.
Zvimwe zvekutaura kwangu zvinhu zvakajeka. Iwe unofunga kuti Rabbi Kolon aida kubvumira munhu kuroora kurangarira here? 🙂 Ndiani akabvumira murume kutevera vabereki vake paatari yezvido zvake? Kana akatizira kumuzinda, achapfeka dema uye kuzviputira mutema, nezvimwewo "uye haazoparadzi hupenyu hwevabereki vake mukusuwa kukuru.
Hapana anoponeswa kubva mumatambudziko ake munhamo. Bvunza chero mushandi wezvemagariro evanhu uye achakuudza
, Kuti hwaro hwezvinhu ndiko kutora munhu kubva mukunzwa kweanobatwa. Kana munhu achinge atora mutoro wekupedzisira kwake - anenge atowana nzira yekuregererwa. Uye kana zvichinyangadza - zvakare zvinoshatirisa, mutauro wehasha ..
Nekuremekedzwa kwese kwakakodzera kune "chikamu chedu" iwe uri kufuratira zvinzvimbo zvakasiyana zvachose izvo nhasi zvinenge zvave kubvumirana kwehunyanzvi (ini handisi nyanzvi uye ndinewo zvimwe zvekufungira pamusoro pekubvumirana uku, uye zvakadaro iwe unoregeredza ne flick yepeni chete. nokuti Dr. Nhingi-nhingi vakadaro). Uyezve, kunyange mashoko ake pachake, sezvawaataura, haadi. Ndinogona zvakare kutaura kuti kana iwe uchitenda zvakanyanya uye wakatsunga zvakanyanya uye mafungiro ako asina kukwana unogona kukunda. Vangani variko? Uye vangani vamwe? Vangani vavo vakabudirira? Akapa nhamba here? Sayenzi inoshanda ne quantitative estimates kwete nema slogans (pamwe akazviunza zvese, asi pane zvawataura hapana chandaona).
Mamwe matauriro ako akajeka, sezvakangoita vavatangira. Ndiani pano akataura kuti Maharik aida kubvumidza kurangarira? Uye kuti tiri kubata nevatongi?! Kana usina kunzwisisa, ndichatsanangura zvandinoreva. Nzira yako ine chisungo chetsika chekutevedzera zvinotarisirwa nevabereki nekuti vakandibereka uye vakaisa mandiri. Saka kana vakandikumbira kuti ndiroore mumwe mukadzi uye kwete asingazivikanwe - semaonero ako ndingadai ndakavateerera, handiti? Chokwadi ndizvo. Asi zvokuita, anoti kwete (uye saka akatonga muRama). Hunhu huri papi apa? Zvazvinoreva: Hapana musengwa wetsika wokuteerera vabereki pakusarudza wokuroorana naye. Havana kodzero yokundirayira maererano noupenyu hwangu. Saka zvine basa rei kana ikarangarirwa kana kuti kwete? Misiyano pakati pavo ndeye halakhic, asi iwe wakataura pamusoro pechisungo chetsika chekuteerera zvinodiwa nevabereki, uye hapana musiyano munyaya iyi. Pane zvakasiyana, kusarudza mukadzi panzvimbo yemurume kutambura kukuru uye kunenge kusingabviri kumwanakomana, asi kutsiva mumwe wevakaroorana nemumwe chinhu chisingaenzaniswi chiri nyore. Saka nei asingafaniri kuita izvi? Uye mumutauro wako: ndiani akabvumira murume kusunga vabereki vake uye kuvaparira kusuruvara kwemoyo paatari yezvishuvo zvake zvinomutungamirira kumurume mumwechete waanoda. Ndiani acharuma zvishuwo zvake uye kutora mumwe mukwanyina uye kuita kuti vabereki vake vanodiwa vagutsikane kutsvene zvikuru. Uye kazhinji, kana asina kugadzikana uye akaomerwa kwaari - ngaatsunge uye atende uye aende kuna Dr. Moses uye anomubatsira kukunda. Dambudziko nderei?
Uye nezvekuguma kwemashoko ako, munhu ane kenza achawana nzira yekuponeswa kana chete achigona kutenda maari pachake. Uye ndizvo zvakaita mumwe murwere asingaperi. Aya masirogani asina mubvunzo kusava nehanya uye kusava nechokwadi kweNguva Itsva upenzi. Vanondidzosera kunyaya yaRash Shevdron. Zviri nyore kutaura kana uchitaura nezvevamwe iwe hauna hanya navo. Bvunza chero mushandi wezvemagariro evanhu uye achakuudza izvi.
Ngatitange kubva kumagumo:
Handina kutaura kuti munhu ane cancer achaponeswa. Ndakati munhu ane chirwere chakanyanya kuita sechisingarapike, anotsvaka mushonga. Mambo Hezekia, muporofita waMwari, anoti kwaari, 'Nokuti wakafa, haungararami.' Iwe wakatsvaga uye wakatsvaga, unogamuchira kutonga kwedenga nerudo, mvumo yakapiwa kuna chiremba kuti apore - kwete kupererwa.
Pane mumwe muJudha anodiwa, R. Cohen-Melamed, aiva nechirwere chetsandanyama makore anopfuura 15 apfuura, uye mumwe wavanachiremba akabva amuudza kuti akanga asara nemwedzi mishoma chete kuti ararame. Dr. Melamed haana kumuteerera. uye anorarama nanhasi uye anonyora mabhuku Panguva iyi akakwanisa kuenda kumariro achiremba uyo akamuvimbisa nezverufu rwake rwaive pedyo):
Nezve tsika -
Handina kuuya kuzoita nhaurirano dzehuzivi nesainzi, hongu hazvigoneke? - Ndinoona pamberi pemeso angu mufananidzo mumwe chete, jaya rakavhiringidzika uye rakanyara rakabvarurwa pakati pekuda kwake uye kutenda kwake. Hapana nzira munyika yekubuda nayo nemusiki wayo nemusiki. Mukana wake chete wekubuda mugomba ndewekutsvaga mhinduro, uye ndiri kuedza kutsvaga kero paanogona kugadzirisa dambudziko.
Ini ndinotya zvishoma nezve 'mazano epfungwa', nekuda kwezvikonzero zvakati: ivo vane tariro zvakanyanya, uye mukomana anouya aine yakakwirira mwero wetarisiro uye kunyanya tarisiro yekubudirira kwekukurumidza, anogona kuwira mukuora mwoyo. Kunze kweizvozvo, kune vamwe varapi vasiri nyanzvi vanozvipira. Uye kune yavo 'inodzokorora nzira', iyo inoedza 'kupa simba rehurume' - yakanaka chete kune mamwe mamiriro, uye hazviite kwandiri kuti ichi ndicho chikonzero chezviitiko zvese.
Ndiko kusaka ndakatendeukira kuna Dr. Zvi Mozes, vandisingazive ini pachangu, asi maitiro avo etarisiro asi akangwarira zvikuru - anokurudzira tariro yekungwarira mandiri. Nemi, ndangomutora muchidimbu. Mukutaura kwangu pamusoro pezvinyorwa zviviri zvaYoav Sorek, ndakanetseka kukopa ndima mbiri huru mumashoko ake anojekesa mikana uye mikana yavo (nekuti 'Link' ini handizivi kuita, panguva iyi ini 'Linkopov' hairapike :).
Zvakaitika kune veteran therapist mumunda, haaendi netsoka… uye ibasa redu kuzivisa vasina kusarudzwa nezvekuvapo kwayo, uye mukana wekuyedza kuwana rubatsiro kubva kwairi.
Tsanangudzo yako muMaharik yekuti mwanakomana haana chikwereti kuvabereki vake haina kujeka zvachose. Ini ndinoona sekuti vamwe vanonzwisisa kuti uku kukudzwa kwababa vakarambwa nekuda kwemitzvah yekuti mwanakomana aroore mukadzi, kuti kana awana mukoshi uye achida Man Mifis aizomuwana? Dr. Moses anogona kubatsira mukomana anoda kuita kuti Kono ade kubva pawanano yakarambidzwa, asi abve pawanano yakanaka kudenga nevanhu - Mwari ngaadaro.
Uye muchiitiko chipi nechipi, kunyange apo jaya rinobvumirwa ndokurairwa kuroora nokuda kwechisarudzo chomwoyo waro mukupesana nokuda kwavabereki varo, rinosungirwa kutaura kwavari zvinhu zvakanaka uye zvinonyaradza, nounyoro hwose noruremekedzo. Iti kwavari: ‘Vabereki vanodiwa, ndinoda uye ndinokoshesa zvose zvamakandiitira, uye ndine chokwadi chokuti muchava nokuzvipira kutsvene kubva kumusikana uyu akarurama nomukadzi mhare’. Uye kazhinji kunyange kana vasingayananisi pakarepo - vachayananisa kana muzukuru aberekwa.
Vachava nemufaro wei kubva pakurambidza kweKirete kwakaitwa kunonzi 'kunyangadza'?
Ndakanyora ruregerero panzvimbo iyi nekuda kwehukasha hwemashoko angu, uye ndinodzokorora pano zvakare (handina kunzwisisa kuti sei zvichiitwa nenzira mbiri. Handioni zvinhu pano zvinoda kuvanzika kwakanyanya. Ndakaona kuti zvimwe nhaurirano yakadzoserwa zvisizvo kune email pano).
Sezvineiwo, chainyanyondinetsa chainyanya kutaurwa nezvacho, asi ndairambawo zvakanyanya nezviri mukati. Uye marudzi emarudzi ako achapindirwa.
Kana iri iyo Maharik uye pfungwa yekuremekedza nharaunda yevamwe, ona zvandinotaura muzvinyorwa pano:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA/בכל Nenzira, zvakajeka kuti matauriro kuvabereki anofanira kuva anoremekedza.
Zvese zvakanaka uyezve sorry
Muna S.D. XNUMX muna Elul, p
Nhaurirano dzangu dzichangoburwa naRabbi Avraham dzakaitika pakati pedu mune yakavanzika email, uye yakaiswa panzvimbo iyi manheru ano - haina kurongerwa naMaikra kuti ibudiswe pasaiti, uye inofanirwa kubatwa se 'dhizaini', izvo zvisingaite. ratidza mhedziso yakabatana.
Ndinokumbira ruregerero nekusanzwisisana. Sezvandakanyora, ndakafunga kuti nekukanganisa zvinhu zvakaenda kune email yenguva dzose panzvimbo yesaiti, uye handina kuona mavari chero chinhu chakatsauka kubva muhurukuro yakaitika pano panzvimbo, saka ndakavatumira (munguva chaiyo. ) yekurodha kune saiti. Chete izvozvi vauya nekuti iko zvino gakava rapera. Uye chaizvo maposts ekupedzisira pakati pedu pandakaona kuti aisaitirwa pano handina kuaisa. Zvakadaro, sorry zvakare.
Kumuchenjeri Rabbi MDA, azere nehuchenjeri nesainzi, seakavimbika economist uye daredevil, Delbish Mada, kudzidza Tora uye kuidzidzisa, uye akashongedzerwa muchiyero chose, chakarurama uye chinokudzwa - rugare rwake ruchadzoserwa kuHada, uye Tora nechitupa zvichawedzera, kuvhenekera meso enzanga! - Rugare neruponeso rukuru,
Ini ndichada zvimwe zveizvi, nei guta rakarurama pamusoro pedambudziko rekuti kurapwa kwehunyanzvi hwepfungwa kunosanganisira mari yakakomba, iyo dzimwe nguva inodzivisa avo vanoida, uye inoita kuti zvivaomere kushingirira navo.
MuKochav Hashahar nenzvimbo dzakapoteredza, vakawana mhinduro nekutanga homwe inonzi 'Chaim Shel Tova' (inotungamirirwa naRabbi Natan Shalev, rabhi weMevoot Jericho), iyo inobatsira mhuri uye vaviri kurapwa kwepfungwa kune avo vanoshaya.
Zvakakodzera kutora nzira iyi yekuita munharaunda yese nenzvimbo, uye kumisa mari yakafanana inozokurudzira nekubatsira mukutarisira hutano hwepfungwa kumunhu nemhuri.
Jaya rakataura pakati pezviuru zvaJudha, richiratidza kutya kwaro;
Damchavi Kida, kwaziso nekutenda, S.C. Levinger
Shalev naYesha Rab kuna Mr. Chen Chen nokuda kwezvishuwo zvavo uye mhinduro.
Uye maari uye mandiri tichabata nyuchi mudutu, tsvimbo yemutungamiri inoitwa kuzununguka. Kana muroma akakuudza bakatwa aya ziva kuti Jerusarema pagomo rakavakwa.
Tichakunda Shumba muchiedza chezviedza, uye tichaponeswa pamitemo yose youtsinye. Munhu achadanidzira nenzwi kuhama yake, vanakomana navanasikana vane mushumiri anotambudzika. Uye ndichasaina chikumbiro kumugari anotambudzwa, watichasaina zvachose gore rino.
30 Tishrei 10 - 2016/12/35 na XNUMX:XNUMX
Hurukuro pamusoro penyaya yacho ichawanikwa muchirimo mune zvinyorwa:
Roni Schur, 'Zvinokwanisika kuchinja (pakurapa kwemaitiro akasiyana mu' Advice of the Soul '), Tzohar XNUMX (XNUMX), pa' Asif 'website;
Rabhi Azriel Ariel, 'Pane munhu anogona kuchinja here? (Mhinduro) ', uko, uko;
Dr. Baruch Kahana, 'Chitendero, Sangano uye Reverse Tendencies', Tzohar XNUMX (XNUMX), pawebsite ye'Asif'.
Dr. Zvi Mozes, 'Ko Kurapwa Kwekudzoserwa Kwepfungwa Kunoshanda', pawebhusaiti ye'Root'.
Pfupiso yakadzama yemhando dzekurapa uye inosunga uye isina kunaka nzvimbo - muWikipedia, iyo yekupinda 'kutendeuka kurapwa'.
Ikozvino ndagamuchira mhinduro ye psychoanalytic society muIsrael kune "mazwi evaRabhi":
Seva psychoanalyst vanozvipira kunzwisiso yakadzama yepfungwa dzevanhu uye kubatsira mukushungurudzika kwavo kuburikidza nekurapa kwepfungwa, tinozviona sebasa redu kupikisa kutaura kwekutuka nguva pfupi yadarika kwakaitwa nevarabhi maererano nenharaunda yeLGBT. Kutaura kuti ungochani ihosha yepfungwa, "kutsauka", "kuremara kunoda kurapwa kwepfungwa", kukanganisa kwakakomba kwechiremera chemunhu uye rusununguko - uye kunopesana nechinzvimbo chinogamuchirwa chemazuva ano uye ruzivo rwehunyanzvi hwemazuva ano nezvekuita zvepabonde uye kuzivikanwa. Kupa 'kuongororwa kwepfungwa' nevarabhi nevadzidzisi vasina kudzidziswa izvi hazvina kunaka uye tinoona kutaura kwemafungiro akadaro sengozi chaiyo kumweya uye kunyange hupenyu hwevechidiki nemhuri dzavo.
Yossi Triast (Sachigaro) - akamiririra Psychoanalytic Society muIsrael
Uye hameno kuti murume wacho ibenzi here kana kuti murevi wenhema. Zvaanonyora hazvina musoro hongu. Anogona kuva nechinzvimbo kana chimwe pamusoro pomubvunzo wokuti ungochani hwakashatiswa here kana kuti kwete, asi zvine chokuita neruzivo rwenyanzvi rwaangave anarwo. Saka anenge ari benzi. Kunyangwe kungava kushandiswa nemaune kweheti yake yehunyanzvi kusimudzira kukosha kwechirongwa, iye zvino murevi wenhema. Ndinosiya muverengi kuti asarudze pakati pezvasarudzo.
20 Tammuz 07 - 2020/14/43 naXNUMX:XNUMX
Handifungi kuti ibenzi. Pane kushaikwa kwekuziva kunovhiringidza ikoko, uye kunoonekwawo muvanhu vakangwara. Kana iwe ukazvishambidza nechinhu chakareba zvakakwana, unotanga kufunga kuti ichokwadi uye haiperi. Zvinosuruvarisa izvi zvinoitika zvishoma.
20 Tammuz 07 - 2020/15/00 naXNUMX:XNUMX
Ndakapindura Pingback ipapo
Fingback: Ziva nyanzvi Pamutemo uye zvakadzama
Bato reArab muhurumende
Mibvunzo kubva kuAmartzim
Hananel On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Ndiani anokwira? On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
Zvine musoro On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)
mikyab On Kusimuka nekudonha kwaBennett uye Zvazvinoreva (Koramu 486)